उपयुक्त कथावस्तु र असल नियतले निर्माण गरेका चलचित्रहरुले मनग्यै आम्दानी गरिरहेका छन् ः निर्माता बस्नेत – Namaste Filmy
उपयुक्त कथावस्तु र असल नियतले निर्माण गरेका चलचित्रहरुले मनग्यै आम्दानी गरिरहेका छन् ः निर्माता बस्नेत
प्रस्तुती ः राजेन्द्र कार्की
सुनिल बस्नेत निर्माणाधिन चलचित्र “ठूली”का कार्यकारी निर्माता हुन । सर्लाही जिल्ला भक्तिपुरका बस्नेत राजधानीको बाघबजारमा अवस्थीत “सिने जुन प्रोडक्सन हाउस”का संचालक पनि हुन । “बसमा छैन यो मन” चलचित्रमा अभिनय समेत गरिसक्नु भएका उहाँ नेपाली चलचित्रहरु स्वच्छ बन्न नसकेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्नु हुन्छ । यद्यपी नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि एक दिन सवल बन्न सक्नेमा विश्वस्त रहनु भएका उहाँ ठूली चलचित्रको कथावस्तु उपयुक्त लाग्नुका साथै युनिट नै राम्रो लागेकोले लगानी गर्न हौसिएको बताउनु हुन्छ । आगामी दिनहरुमा समेत पारिवारीक र समाजिक चलचित्रहरुमा लगानी गर्ने मनस्थितीमा रहनु भएका उहाँसँगको कुराकानीको संक्षिप्त अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रश्न ः चलचित्र ठूलीमा लगानीका लागि हौसिनु भएको छ । यस चलचित्रको खास विषय वस्तु चाहीँ कस्तो पाउनु भयो यहाँले ?
उत्तर ः राम्रो जिच आफ्नो होस् भन्ने चाहना सबै मानिसमा हुन्छ । लगानीको लागि प्रस्ताव आयो । कथा वस्तु पनि राम्रो लाग्यो । मैले ओके भनिदिएँ । ठूली हाम्रो समाजको यथार्थ समाजिक कथावस्तुमा आधारीत नारी प्रधान चलचित्र हो ।
प्रश्न ः नेपाली चलचित्रमा लगानी गर्नु भनेको त ठूलै जोखिम उठाउनु हो भन्छन । नेपाली चलचित्रहरु आशातित रुपमा चलिरहेका पनि छैनन् । यस्तो पृष्ठ भुमिमा ठूली बाट के आशा गर्नु हुन्छ ?
उत्तर ः वास्तवमा चलचित्र क्षेत्र र यसको ब्यावसायीक पक्षलाई नबुझिकनै निर्माता बन्ने होड नै चलेको देखिन्छ । मिल्लीक्क आउँछन, हराउँछन । तर मैले यस क्षेत्रलाई धेरै हद सम्म बुझेको छु । राम्रो सन्देश, मनोरञ्जनात्मक र सहि नियतले निर्माण भएका चलचित्रहरु हिन्दी चलचित्रहरुकै प्रतिस्पर्धामा चल्न सफल पनि भएका छन् । लगानी गरी हाल्ने, चलचित्र जस्तो सुकै होस्, रमाइलो पनि गर्ने कमाइ पनि हाल्ने भन्ने जस्ता गलत नियतबाट प्रेरित भएर निर्माण भएका चलचित्र भने ४८ घण्टा पनि टिक्न सकेका छैनन् । नेपाली समाज सापेक्ष सामाजिक र पारिवारीक चलचित्र भने राम्रै चलिरहेका छन र आम्दानी पनि गरि नै रहेका छन् । मैले चलचित्र ठूलीको कथावस्तु सबै पक्षबाट हाम्रो समाजको लागि उपयुक्त पाएर नै लगानीको जोखिम उठाएको हुँ । प्रत्येक ब्यावसायीक क्षेत्रमा एउटा हातमा लाभ रहेको हुन्छ भने अर्को हातमा जोखिम पनि रहेको हुन्छ । मैले जोखिमलाई ब्यवासायमा स्वाभाविक रुपमा लिने गरेको छु ।
प्रश्न ः नेपाली चलचित्रहरु प्रति दर्शकहरु त्यति आकर्षक हुन नसकेको कारणहरु यहाँले के के देख्नु भएको छ ?
उत्तर ः सर्वप्रथम त निर्माताहरु रहरमा नै लगानी गर्न आउँछन । अधिकांश चलचित्रहरु उच्छसृखल र हाम्रो परिवार र समाजले पचाउन नसक्ने प्रकारका रहेका छन् । तसर्थ भित्री मन देखि नै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केहि योगदान पु¥याउँछु भन्ने भावनाका साथमा समाजले पचाउन सक्ने खालको चलचित्र निर्माण हुन सक्यो भने अवश्य पनि कलिउडमा पनि सु–दिनहरु आउने छन । पक्कै आउने छन ।
प्रश्न ः तपाइले भन्नु भएको जस्तो परिस्थीतको निर्माण गर्न सरोकारवालाहरुले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिदियोस भन्ने लागेको छ ?
उत्तर ः उच्छसृखल र हाम्रो समाजले पचाउन नसक्ने चलचित्रहरुका निर्माता÷निर्देशकहरु मात्र बडारिएका छैनन् की त्यस्ता चलचित्रहरुका कलाकारहरु कै पत्ता साफ हुँदै गइरहेको तपाइ हामीले प्रस्ट देखिसकेका छौं । हामी सरोकारवालाहरुले त्यस्ता चलचित्रहरुलाई तिरस्कार गर्दै जानु पर्दछ । एक दिन अवश्य पनि हामं्रो समाजिक मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर मर्यादित चलचित्रहरुको निर्माण हुने छन् । परिणामस्वरुप यसमा संलग्न हुनेहरुको आत्मसम्मान समेत बढ्ने मैले देखेको छु ।
प्रश्न ः चलचित्रमा प्रस्तुत हुने ग्याल्मर्सलाई उच्छसृखल भन्न खोज्नु भएको हो ?
उत्तर ः होइन, त्यस्तो पट्कै होइन । चलचित्र त आफैमा एउटा ग्याल्मर्स नै हो । तर चलचित्रमा प्रयोग गरिने सामान्य ग्याल्मर्सको नाममा चलचित्र क्षेत्र कै बदनाम हने क्रियाकलापलाई मात्रै मैले औंल्याउनु खोजेको हुँ । समाज सुहाउँदो प्रकारको र परिवारका सबै सदस्यहरु सँगै एकसाथ बसेर हेर्न सक्ने सम्मको नेपाली चलचित्र हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता हो । ग्याल्मर्सको अर्थ उत्ताउलो र भड्किलो हुनु हुन्दैन भन्ने मात्र हो ।
प्रश्न ः नेपाली चलचित्र क्षेत्र यसरी नै सवल बन्दै जान्छ भन्ने कुरामा कत्तिको आशाबादी हुनु हुन्छ तपाई ?
उत्तर ः मैले अघि पनि यस विषयमा भनीसकेको छु । चलचित्रका सवल पक्षलाई आत्मसाथ गर्नु पर्दछ । खराब कुराहरुलाई हटाउँदै जानु पर्दछ । एकले अर्कालाई खुट्टा तान्ने, अपमानका शब्दहरु प्रयोग गर्ने होइन की आदर सम्मान गर्न सिक्नु पर्दछ । अरुलाई सहयोग नै गर्न नसके पनि सद्भाव राख्न सक्ने हाम्रो स्वभाव बन्न सक्नु पर्दछ । त्यस पश्चात अवश्य पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्र अनुशासित र मर्यादित बन्न जानेछ । परिणाम स्वरुप सक्षम, अनुशासित चलचित्रकर्मीहरुको यस क्षेत्र प्रति आकर्षण बढ्न जानेछ । यति भइसके पछि नेपाली चलचित्रको बजार अन्तराष्ट्रिय क्षेत्र नै बन्न जाने छ । यसरी मैले त नेपाली चलचित्र क्षेत्रको स्वर्णीम भविष्यको सुन्दर तस्वीरहरु देखेको छु । धन्यवाद ।
एकअर्कामा समर्पित छन रणवीर र कैटरीना ।
`मेरो बेष्ट फ्रेण्ड`को अडियो बिमोचन ।